Export ozi ederede site na Android na kọmputa maka ndabere.
Ide ozi n'ekwe ntị! Mgbe ya na nke mbụ mepụtakwara, ya ẹkenam anyị ka anyị ụwa ọhụrụ. Na ụwa ọhụrụ a, anyị na-eme enyi na ibu nke ọma na-echeta. Ma, ọ apụtachaghị naanị ihe anyị na-eji ya na-emefu ezigbo oge. Mgbe ụfọdụ, ọ na-arụ ọrụ metụtara na ọtụtụ dị oké ọnụ ahịa ihe ọmụma anyị nwere ike ma na-echefu ma ọ bụ hichapụ, ina echekwara na anyị Android igwe. Anyị na-eche ndị ọmụma dị mma ebe ha bụ ndị. Otú ezi ka ọ bụ? Gịnị ma ọ bụrụ na ị ihichapụ a kpọmkwem ozi, nke bụ nnọọ dị gị mkpa? Onwe m na-nza nke ozi ma na mgbe m mkpa nwere ohere otu ozi, m ọgụ na mgba na-achọta ya. Obi ụtọ na-na e nwere ihe a ụzọ gbochie nke a si na-eme na ibudata ozi ederede site na android, na nke ahụ bụ mgbe WonderShare MobileGo abịa kemfe.
Mere, ọ bụrụ na gị na ekwentị ihuenyo gbajiri ma na ị nwere ozi ederede ị ga-enwe ohere, e nwere mkpa masịrị banyere adịkwa gị niile ozi ederede! Ị nwere ike ibudata ozi ederede site na android. Anọgide na na-agụ isiokwu a chọpụta otú ibudata ozi ederede site na android site na iji Wondershare MobileGo. Taa, anyị na-egosi gị otú ị ndabere gị niile ozi ederede na nwere ohere ha mgbe ọ bụla ị chọrọ, na gị na PC.
Part 1: Olee mbupụ ozi ederede site na Android ka PC:
Nkebi nke 2: Olee otú Jiri Wondershare MobileGo mbubata SMS:
Nkebi nke 3: Wondershare MobileGo na Download
Nkebi nke 1: Olee otú ibudata ozi ederede site na Android ka PC:
Wondershare MobileGo bụ oké software tọhapụrụ site Wondershare Company. MobileGo bụ otu n'ime ihe kasị ike ngwaọrụ ya obiọma. Na a dị mfe ma na ọrụ enyi na enyi elu. Ọ na-enyere gị jikwaa gị niile mbadamba na ekwentị mkpanaaka na kwadoro site na Android na naanị otu software. Site n'enyemaka nke a software, ị nwere ike mbupụ ozi ederede site na Android gị PC na naanị otu click. Nke ahụ bụ bụghị ọgwụgwụ! Ị nwere ike ndabere kọntaktị gị, égwu, oku na ndekọ, music, videos, foto na ọbụna kalenda gị. Atụmatụ WonderShare MobileGo ka:
-Can na nkwado ma weghachite gị niile echekwara ozi ederede
-Download ozi ederede site na Android
- Zọpụta ozi ederede site na android dị ka ... (XML na txt)
- na ọtụtụ ndị ọzọ.
Tupu anyị amalite ndị nkuzi, e nwere ihe ụfọdụ dị anyị mkpa ịghọta. Mgbe ị mepee software na jikọọ ekwentị gị, software ga chọpụta ekwentị gị na-egosi na ị a na foto nke ya. Dị ka ị pụrụ ịhụ, na software na-agụnye 3 akụkụ dị iche iche, My Ngwaọrụ, Super Toolkit na Download.
Ugbu a, ihe ndị a bụ?
My Ngwaọrụ: Nke a bụ isi na peeji nke MobileGo. Ọ bụ ebe ị nwere ike ijikwa ihe niile na ekwentị gị, gị SMS, Music, ngwa ọdịnala, video na akwụkwọ faịlụ.
Super Toolkit: Nke a ngwá ọrụ ego n'anya kewara 3 akụkụ onwe ya. Ndị a bụ Advanced, Mkpa na Media Management.
Elu: N'ihi na Android, ọ na-enye 4 bara uru ọrụ. Data nchicha, One Click Nkpọrọgwụ, Data Recovery na ekwentị Nyefee. Mkpa: Nke a na akụkụ na-enye ndị isi atụmatụ na e na nso nso-eji.
Media Management: Ebe i nwere ike mbubata video na music ngwaọrụ gị. Ozi ọma bụ, naanị maka Android ọrụ, ọ na-enye gị ike na mbupụ music na video si gị gam akporo ngwaọrụ gị PC.
Nke a bụ ebe ị nwere ike ibudata music, video, ngwa si ​​Mee na-Google Play, MP3 download, YouTube na ihe ọ bụla kwukwara saịtị dị ka mma.
Ugbu a na anyị maara na ihe ndị bụ isi nke a software, ọ bụ oge iji nweta ihe ọmụma nke otú anyị pụrụ mbupụ SMS si Android.
Tupu anyị amalite ndị nkuzi, ka ijide n'aka na anyị na-agaghị na-enwe nsogbu ọ bụla na ejikọta gị gam akporo ngwaọrụ gị PC . N'ihi na, jide n'aka na ị na-USB debugging nyeere na ngwaọrụ gị. Full ntụziaka e nyere oge mbụ ị na-emeghe Wondershare MobileGo. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a na-arụ ọrụ eriri USB ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri USB, ọ dịghị ihe a ga-nchegbu banyere. The software awade njikọ n'elu Wi-Fi dị ka mma. Ị dị nnọọ mkpa soro ntuziaka dị ka e nyere na software. Lunch MobileGo, Jikọọ na ngwaọrụ gị na biko na-enwe ndidi ruo mgbe ngwaọrụ gị a n'ụzọ zuru ezu ejikọrọ.
Mgbe njikọ a n'ụzọ zuru ezu mere, ị ga-ahụ na ngwaọrụ gị na My Ngwaọrụ window.
N'okpuru ngwaọrụ gị aha ke ekpe mmanya, pịa SMS na-enwe ndidi mgbe software na-ebukwasịkwa gị ozi ederede.
Mgbe window na n'elu, ị ga-enwe ike ịhụ gị niile ozi ederede.
Iji họrọ nanị otu mkparịta ụka mbupu, pịa na mkparịta ụka ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ họrọ ọtụtụ mkparịta ụka, i kwesịrị pịa na igbe n'akụkụ ọ bụla mkparịta ụka.
Mgbe ị na-mere-ahọpụta mkparịta ụka mbupu, pịa na Export button na elu mmanya.
Họrọ ọnọdụ na aha nke faịlụ na ị chọrọ ịzọpụta.
Pịa na Save
Chere ruo mgbe exporting okokụre. Pịa na Open nchekwa ma ọ bụ Ok mezue ebupụ.
Iji mbubata ozi ederede gị Android ngwaọrụ site na PC, biko soro anyị ntụziaka na-esi mbupụ SMS gị PC ruo mgbe ị iru Nzọụkwụ 4:
5- Pịa na Import. (Mgbe a na ogbo, ị na-adịghị na họrọ ihe ọ bụla).
6- The software ga-arịọ gị ịgbanwe gị ozi ngwa ka ndabere, dị ka e gosiri n'okpuru. Enweta na Ok na ngwaọrụ gị na mbụ, na mgbe ahụ gosi ya na gị na PC.
7- Họrọ faịlụ nke na ị chọrọ mbubata, mgbe ị na-mere ị na-ahọrọ faịlụ (s), pịa Open. Img18
8 ruo Biko ndidi ruo mgbe importation na dechara.
9 ị na-mere importing ozi ederede. Ugbu a software ga-arịọ gị iji gosi ọzọ mmapụta window.
Akwụpụla ngwaọrụ gị site na PC gị na-enweghị ejecting ya. Nke a nwere ike ịkpata nsogbu. Iji idaputa ekwentị gị, pịa 'Zoro Oyiyi', nri pịa MobileGo icon, na idaputa ya.
> Resource> ihichapu> Export ozi ederede site na Android na kọmputa maka ndabere